Soo dejisan PeerBlock 1.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: PeerBlock
PeerBlock – software ah inuu horjoogsado xidhiidhada network la kombiyuutarada iyo server ee internet-ka ah. Marka isku xirta PeerBlock baadhbaadha-IP cinwaanada kuwaas oo ka mid ahaa in liiska madoow sababtoo ah faafidda fayrusyada, advertising iyo content laysan lahayn. Software waxuu si ay u isticmaalaan si cad u heli karo ama u abuuray by liiska user xakameyn khatar IP-address. PeerBlock ka kooban qalabka reserved isku xirka xiran tahay ama aan la ogol yahay, wargelinta ah ee dhacdooyinka network oo ka dhex shaqaynaya hab qarsoon. PeerBlock sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad awood ama gab ilaalinta la si toos ah u qaabbili by software ah.
Blocks xidhiidhada ay la khatar IP-cinwaanada
Waxay abuurtaa iyo itusi Blacklists ah
Si toos ah u cusbooneysiin liiska madoow ee IP-cinwaanada
Work in hab qarsoon
Soo dejisan PeerBlock
Faallo ku saabsan PeerBlock
PeerBlock Xirfadaha la xiriira
Tani waa falanqeeye koodhalka ilaha oo leh qalab loogu talagalay abaabulidda qaybaha koodhka kala duwan iyo hagaajinta xirfadaha lagu qoro iyadoon qaladaad lahayn.